Mkpughe 7 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
7 Mgbe nke a gasịrị, ahụrụ m ndị mmụọ ozi+ anọ ndị guzo na nkuku anọ nke ụwa, ha jidesiri ifufe anọ+ nke ụwa ike, ka ifufe ọ bụla wee ghara ifekwasị ụwa ma ọ bụ oké osimiri ma ọ bụ osisi ọ bụla.+ 2 M wee hụ mmụọ ozi ọzọ ka o si n’ọwụwa anyanwụ+ na-arịgo, o nwere akara nke Chineke dị ndụ;+ o wee jiri oké olu tikuo ndị mmụọ ozi anọ ahụ e nyere ikike imebi ụwa na oké osimiri, 3 sị: “Unu emebila ụwa ma ọ bụ oké osimiri ma ọ bụ osisi, ruo mgbe anyị kasịrị ndị ohu nke Chineke anyị akara+ n’egedege ihu.”+ 4 M wee nụ ọnụ ọgụgụ nke ndị ahụ a kara akara, ya bụ, otu narị puku na puku iri anọ na puku anọ,+ bụ́ ndị a kara akara n’ebo niile+ nke ụmụ Izrel:+ 5 N’ebo Juda,+ a kara puku iri na abụọ akara;n’ebo Ruben,+ puku iri na abụọ;n’ebo Gad,+ puku iri na abụọ; 6 n’ebo Asha,+ puku iri na abụọ;n’ebo Naftalaị,+ puku iri na abụọ;n’ebo Manase,+ puku iri na abụọ; 7 n’ebo Simiọn,+ puku iri na abụọ;n’ebo Livaị,+ puku iri na abụọ;n’ebo Ịsaka,+ puku iri na abụọ; 8 n’ebo Zebulọn,+ puku iri na abụọ;n’ebo Josef,+ puku iri na abụọ;n’ebo Benjamin,+ a kara puku iri na abụọ akara.+ 9 Mgbe ihe ndị a gasịrị, ahụrụ m, ma, lee! oké ìgwè mmadụ,+ nke onye ọ bụla na-enweghị ike ịgụta ọnụ, ndị si ná mba niile+ na ebo niile na ndị niile+ na asụsụ niile+ pụta, ka ha guzo n’ihu ocheeze ahụ+ nakwa n’ihu Nwa Atụrụ ahụ. Ha yi uwe mwụda na-acha ọcha;+ ha jikwa igu nkwụ+ n’aka. 10 Ha wee na-eti mkpu n’oké olu, sị: “Nzọpụta anyị si n’aka Chineke anyị,+ bụ́ onye nọ ọdụ n’ocheeze ahụ,+ nakwa n’aka Nwa Atụrụ ahụ.”+ 11 Ndị mmụọ ozi niile+ guzokwa ocheeze ahụ na ndị okenye ahụ+ na ihe anọ ahụ dị ndụ+ gburugburu, ha wee gbuo ikpere n’ala, kpudo ihu ha n’ala n’ihu ocheeze ahụ ma kpọọrọ Chineke isiala,+ 12 sị: “Amen! Ka ngọzi na otuto na amamihe na ekele na nsọpụrụ na ike+ na ume dịrị Chineke anyị ruo mgbe niile ebighị ebi. Amen.”+ 13 Otu n’ime ndị okenye ahụ+ wee sị m: “Ndị a yi uwe mwụda na-acha ọcha,+ olee ndị ha bụ, oleekwa ebe ha si bịa?” 14 M wee sị ya ozugbo: “Onyenwe m, ọ bụ gị onwe gị maara.” O wee sị m: “Ndị a bụ ndị si n’oké mkpagbu ahụ pụta,+ ha asawokwa uwe mwụda ha, meekwa ka ọ na-acha ọcha+ n’ime ọbara+ Nwa Atụrụ ahụ. 15 Ọ bụ ya mere ha ji nọrọ n’ihu+ ocheeze Chineke; ha na-ejekwara ya ozi dị nsọ+ ehihie na abalị n’ụlọ nsọ ya; Onye ahụ nke nọ ọdụ n’ocheeze ahụ+ ga-agbasakwa ụlọikwuu+ ya n’isi ha. 16 Agụụ agaghị agụ ha ọzọ, akpịrị agaghị akpọ ha nkụ ọzọ, anwụ agaghị achakwa ha, ha agaghịkwa enwe oké okpomọkụ,+ 17 n’ihi na Nwa Atụrụ ahụ,+ onye nọ n’etiti ocheeze ahụ, ga-azụ ha dị ka atụrụ,+ ọ ga-edugakwa ha n’isi iyi nke mmiri+ nke ndụ. Chineke ga-ehichapụkwa anya mmiri ọ bụla n’anya ha.”+